Kpụrụ Mmepe nke Blockstream ike a supercomputer on blockchain - Blockchain News
Ben Gorlick na Johnny Dilly hapụrụ Blockstream otu mmepe na-arụ ọrụ na ha onwe ha oru ngo nke decentralized ígwé ojii na kọmputa otuowo Machine. Gorlick bụ technical director, na Dilli bụ isi nke usoro ije.
Mmepe kwere na ígwé ojii Mgbakọ usoro mkpa ndozi, na Otuowo Machine awade a blockchain ngwọta. A decentralized ígwé ojii na kọmputa ga-eme ka usoro nke na-eke ngwa na bụla blocker ngwa ngwa ma dị ọnụ ala: “Ihe anyị na-arụ ọrụ na ga-agbanwe iwu site nke software na-kere na-agba ọsọ,” Gorlick kwuru na a mkparịta ụka na Coindesk.
The oru ngo na-agụnye ọtụtụ ụlọ ọrụ na-na ndepụta nke Fortune 500 ụlọ ọrụ, tinyere ge na ukwe. Ugbu a, Mmepe na-anwale usoro na ngwa ka mgbochi Ethereum.
Dị ka a bụbu so Blockstream, Ben Gorlik ahụ nsogbu na eziokwu na ọ bụ nnọọ ike iji blockchains igwe ike n'ihu ngwaahịa dabeere na ha. Na-akọwa ụkpụrụ nke usoro ihe ọhụrụ, O hotara ihe ngwa-kalenda. Na-emekarị na ọ na-wuru na a ígwé ojii n'elu ikpo okwu dị ka Google Ígwé ojii ma ọ bụ Amazon Web Services. Ma oge ọ bụla a onye ọrụ na-arụ ọrụ, a ego na-ebubo site Mmepụta. Gorlick ekwere na nke a usoro bụ a “bottleneck”, nke na-eduga elu-akwụ ụgwọ.
Irè nke Ìgwè Mmadụ Machine bụ n'ihi na eziokwu na nke ọ bụla onye ọrụ ọrụ na-waba ọtụtụ akụkụ na mgbe ibugharị na netwọk nke ngwaọrụ, ọ bụla nke na-emekwa ụfọdụ na ha nhazi. N'ihi ya, ngwa amalite ma na-agba ihe omume, ma ọrụ na-abụghị kegide otu na-eweta.
Ọzọkwa, ọrụ nke ngwa ga-enwe ike-enweta ụgwọ ọrụ maka launching usoro ihe omume na ihe nile ụdị ngwaọrụ: laptọọpụ, smartphones na ọbụna ngwaọrụ “Internet nke ihe”. The kọmputa na-eji echiche nke a “ike gọọmenti”, nke Gorlick na Dilly kere Blockstream. Ọ na-emesi na ọnụ ga-emezu ihe e kpere koodu n'ụzọ ziri ezi.
N'otu oge ahụ, n'ọdịnihu Otuowo Machine dabeere ngwa mmepe na-adịghị ọbụna kwesịrị ịma banyere mmemme: Otuowo App Studio enye gị ohere ike ngwa na iji video interface na ikpuru-and-dobe mode.
“Ede a smart nkwekọrịta ada egwu. Anyị kwesịrị iji wepụ ihe mgbochi”, Ben kwere Gorlick.
Ya mere, ike smart contracts Ethereum i nwere ike na-enweghị ihe ọmụma nke mmemme asụsụ sikwuo ike. Na n'ọdịnihu ọrụ ga na-akwado ndị ọzọ mmemme asụsụ, tinyere Edemede bitcoin.
Gịnị ga-decentralized Facebook anya dị ka?
Mark Zuckerberg ada ...
Previous Post:deVere Group malite cryptocurrency trading ngwa
Next Post:Na mba dị iche iche, bitcoin ahịa nwere ike ịdị iche